ငါဘာလို့ porn ကိုစွန့်လွှတ်ရတာကိုအရမ်းဝမ်းနည်းနေရတာလဲ။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဆယ်ကျော်သက်စုံတွဲတစ်တွဲဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတို့ရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာအကောင်းဆုံးစက်ရုပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့တည်ဆောက်ပြီးသူမကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဟာသတွေကိုမင်းတို့သိလား။ PMO သည်၎င်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှယောက်ျားတစ် ဦး တည်း မှလွဲ၍ သူသည်သူကိုယ်တိုင်မရေမရာနိုင်သောပူပြင်းသည့်အမျိုးသမီးများအားမိမိကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကသာမန်လောကမှာမြေအောက်ခန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့အခါသူတွေ့တဲ့သာမန်အမျိုးသမီးတွေကိုလုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ သူတို့ထံတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လာခြင်းသည်သူစဉ်းစားနိုင်သမျှဖြစ်သည်။
ငါဘာလို့ porn ကိုစွန့်လွှတ်ရတာလဲ? ဤဖြစ်စဉ်သည်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းနှင့်အတူ Breaking UP ကိုချိုးဖောက်ခြင်းပါဝင်သည်။ မင်းတို့ ဦး နှောက်ကမင်းကမင်းတို့မိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်၊ ​​သူတို့ကိုဘယ်တော့မှနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်။ သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကသင့်ကို ၈ ပတ်ကြာတိုက်နေမှာပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိုင်တီဟာဒီနည်းကို HAREM မပျက်စေချင်ဘူး။ စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ငရဲ၊ ထုံခြင်း၊ တရားမ ၀ င်ခြင်းစသည်တို့ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ သင့်အားသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့ပြန်သွားနိုင်ရန်တတ်နိုင်သမျှအဆိုးဝါးဆုံးသောငရဲအားဖြင့်သင်ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ ကြှနျတေျာ့စိတျဇယားမှာကြည့်ပါ! အကြှနျုပျ၏ဦးနှောက် 8 ဖြောင့်ပတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော bullshit အားဖွငျ့အကြှနျုပျ၌ထားလေ၏။
ငါရှက်စရာ / ပျော်စရာတစ်ခုခုမျှဝေပါလိမ့်မယ်သင်နှင့်လည်းတကယ်အရေးကြီးတယ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်တိတိကကျွန်ုပ်၌အလွန်အမင်းပြင်းထန်သောပျောက်ဆုံးနေသည့်ခံစားချက်ရှိသည် - မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ပြိုကွဲပြီးနောက်သင်ခံစားရသောခံစားချက်များကိုသင်သိသည်။ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာတီးမှုတ်နေတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ 'ငါ့သူငယ်ချင်းတွေဘာပဲပြောပြောမင်းငါ့ကိုလုံးဝမပျောက်ပါဘူး' ငါ youtube ကပေါ်မှာကစား, နားကြပ်ပေါ်မှာနားထောင်ခဲ့တယ်။ ငါနှစ်နာရီကြာအောင်တပြိုင်နက်တည်းအော်ဟစ်ကာထပ်ခါထပ်ခါကစားခဲ့သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောအပြာအားလုံး၌ကြိုက်ခဲ့သည့်မိန်းကလေးအားလုံး၏အမှတ်တရများ - ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောမိန်းကလေးများ - ကျွန်ုပ်အနီးကပ်ဆုံး - - ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုလှိမ့်ခဲ့သည်။ ငါသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ခင်ဗျားရဲ့ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူနဲ့သူမနဲ့စကားမပြောဖြစ်တာနောက်ပြီးမင်းဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာ။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်ငါနှစ်နာရီလောက်ငိုခဲ့တယ်၊ အဲဒီနောက်မှာတော့ငါဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ သူတို့ကတကယ်သွားပြီ ထိုညတွင်အရက်ဆိုင် ၃ ခုရရှိပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ရက်ချိန်းခဲ့သည်။
ဒါကြောင့် PMO ကိုဆက်မလုပ်ဖို့အခက်တွေ့နေလားလို့သင်မေးတဲ့အခါ။ မဟုတ်ပါ။ တကယ်လွယ်ပါတယ်။ ထိုမိန်းကလေးများသွားကြောင်းကျွန်ုပ် ဦး နှောက်သိသည်။ လက်ခံလိုက်ပြီ ကျွန်တော့်ကိုသူတို့ဆီပြန်လာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာက ဆက်ပြီးသွားပါပြီ အခုငါအိမ်မှာရှိတုန်းက၊ လိင်မှာလုံးဝဘာမှမရှိဘူးဆိုတာငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကသိတယ်။ ငါထွက်သွားတော့မိန်းမကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုတာကို ဦး နှောက်ကသိချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုမှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကသူတို့နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ M ဟာ menu မှာမရှိတော့တော့ဘဲ၊ option ကို။
PMO လွယ်ကူသော, ပျြောမှေ့စ, အပြစ်ရှိကြားဆက်ဆံရေးကဲ့သို့ဖြစ်၏; သာငါအပေါ်လိမ်လည်လှည့်ခံခဲ့အဆုံးမှာထွက်ရှာလှည့်ဖြားခဲ့, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ငါ့ထံမှတပြင်လုံးကိုအချိန်ခိုးယူခဲ့သညျ။